Onu ala na uzo di nma iji kpacha anya igwe igwe gi - pisklak.net
Onu ala na uzo di nma iji kpacha anya igwe igwe gi
March 11 10:35 2021 nke Clare Louise dere Bipute a Nkeji edemede
Ọ bụrụ na ị bụ onye ọkpụkpọ egwuregwu mgbe niile na situs judi online casinos, ị nwere ike ịnụ ụzọ niile dị iche iche ị ga-esi merie igwe oghere. Booksfọdụ akwụkwọ na teepu na-agwa gị otu esi emeri, enwere usoro d e ndụmọdụ ị ga – eji miniature merie, ma e nwekwara ụzọ igwe nke ọtụtụn’ime anyị ji akụ igwe. Usoro igwe na-abụkarị ihe na-eme ka ọtụtụ ndị nwee iwen’ihi d e ọ na-ewepụ obi ụtọ nke inweta ezigbo ego. Kama inweta obi uto mgbe ị meriri ezigbo self love, ị gaghị ewere self ahụ tinye ya na igwe oghere dị iche iche ebe ị na-agaghị akụli ya? Nke a bụ ajụjụ anyị ga-aza taa n’isiokwu a.
Mgbe ị na-egwu egwu oghere, a na-enyekarị gị igwe eji agba bọọlụ ọhụrụ ise. Even a na-ahazi igwe ndị that a ka ha na-ebido mgbe niile d e uru ụfọdụ ka ọ bụrụ d e ndị na-agba bọọlụ dọpụ lever Id bọọlụ dabaran’ọnụ ya, ọ ga-eme ka self ị bankroll jiri okpukpu abụọ. Enwere ike iji ụdị igwe abụọ rụọ ọrụ na igwe oghere; kpudo otu na ukwu abụọ. Ọ bụ ezie na enwere ọtụtụ ọdịiche dịn’ụdị ụdị a na-eji na igwe ndị a, anyị ga-arapara d e mkpado ndị bụ isi maka mkparịta ụka anyị.
A na-akpọkwa wiil ndị bụ isi “igwe na-enweghị atụ”. Atọ na agba nwere ike ịchọta ndị a na-esi anwụde; acha uhie uhie, nwa, na anụnụ anụnụ. Ọnọdụ nke agba ndị a t igwe akụrụngwa bụkwa ihe dị mkpa na etu igwe si arụ ọrụ. Igwe igwe na-acha uhie uhie atọ ga-akwụ ụgwọ nke ego atọ karịa ka igwe igwe agba anọ ga-akwụ ụgwọ nke ego anọ. Esemokwu ndị a bụ ihe kpatara ụfọdụ igwe ji akwụ ụgwọ karịa ndị ọzọ.
Akụkụ”ntụgharị” nke igwe bụ ihe na-ekpebi ma ọ bụ na reels nwere ike ịkwụ ụgwọ mmeri. Igwe that a na-arụ ọrụ na ọkwa akụkụ abụọ. Otu akụkụ nke igwe ahụ ga-agbagharị na-aga n’ihu, ebe akụkụ nke ọzọ ga-akwụsị ịgbanye mgbe ọ gafere obere nkeji. N’oge ana-ahụta okpukpu dị ka”ndị na-enweghị atụ” ma ọ gaghị akwụ ụgwọ self zuru ezu na ha.
Igwe ndị that a na-enweghị atụ dị mma maka ndị na-achọ ịnwale ọdịmma han’itinye ọdịmma ahụ. Ha nwere ike ịbụ ihe nkoropụ ọ bụ ezie na oge ụfọdụ ị nwere ike imefu nnukwu self na-agba mbọ ịkụda ụda ma ghara imeri. Ọtụtụ igwe ndị a dị n’ebe ndị mmadụ n’otu n’otu nọ. Dịka ọmụmaatụ, ha nwere ike ịnọ na cha cha cha, na nri nri, ma ọ bụ n’ogige ntụrụndụ, ma ọ bụ ebe ọ bụla nwere ike ịnye gị ohere igwu igwe.
Oghere bụ otun’ime egwuregwu kachasị egwu igwu egwu, ma ọ bụrụ d e ịchọrọ inwe anụrị yana ị nwere ike ịhapụ ụfọdụ ego na igwe, mgbe ahụ ị kwesịrị ịtụle oghere ndị na-eme oghere. Nke a bụ ụzọ kachasị mma iji kwenye na ị na-enweta ụgwọ zuru oke maka self ị na-etinye d e igwe. A na-enye ọtụtụ rọketị oge maka obere ihe dịka 10 pennies ọ bụla, nke na-erughị otu dime ma ọ bụ abụọ kwa egwuregwu, dabere na igwe. Ọ bụrụ na-amasị gị ohere mpere na ị chọrọ ijiden’aka na ị na-na-bụla penny t ị nọrọ na igwe, mgbe oghere esi anwụde bụ gị mma nzọ.